FANOHANANA KANDIDA :: Vaky bantsilana ny fisiana tsindry amin’ireo tompon’andraiki-panjakana • AoRaha
FANOHANANA KANDIDA Vaky bantsilana ny fisiana tsindry amin’ireo tompon’andraiki-panjakana
Sady nampitandrina no nanao ampamoaka. Novakian’ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Razafimahefa Tianarivelo, bantsilana, omaly, ny fisiana karazana tsindry samihafa amin’ireo tompon’andraiki-panjakana ambony ataona kandidà miatrika ny fifidianana filoham-pirenena. Nambarany teny amin’ny minisitera iadidiany, tetsy Anosy fa “maro ireo fitarainana voarainy avy amin’ ireo olom-panjakana mikasika an’izay fisiana karazana fanomezana baiko ho fanomezana tombondahiny ho ana kandidà hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 7 novambra 2018 ho avy izao”.
“Niantso ahy izy ireo ary nangataka ny mba harovana”, hoy ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tsy nihambahamba. Manoloana izany dia nampahatsiahy an’ireo fepetra sy ny lalàna manan-kery mifehy an’ireo olom-panjakana ambony amin’ny tsy tokony handraisan’izy ireo anjara amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra, indrindra, fa ny fampiasana fitaovam-panjakana hoentina hanohanana kandidà ny minisitra Razafimahefa Tianarivelo.
Nanantitrantitra ihany koa ny tenany fa afaka handraisana fepetra amin’ny alalan’ny fampiharana ny lalàna manan-kery ireo olom-panjakana minia mihoa-pefy mandray anjara amin’izao vanim-potoanan’ny fampielezan-kevitra izao. Hentitra ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana raha nilaza fa “tsy azon’ireo olom-panjakana atao ny manonona na mitanisa na manao doka ho ana kandidà”. “Lamandy roa tapitrisa hatramin’ny 5 tapitrisa ariary no sazy miandry an’ireo mpiasam-panjakana manao izany. Misy ihany koa ny sazy mafimafy kokoa miandry azy ireo”, hoy izy.
Notsiahiviny nandritra ny tafatafa nataony tamin’ny mpanao gazety, tetsy Anosy, fa andraikitr’ireo olom-panjakana ambony ny mitarika sy mibaiko an’ireo mpitandro filaminana eo amin’ny fiahiana ny fitoniana amin’izao fotoam-pifidianana izao. “Tokony hisy hatrany koa ny fangatahana fahazoan-dalana amin’ny fampiasana ireo toerana hanaovana fampielezan- kevitra farafahatarany roa andro mialoha”, hoy hatrany izy.
LALAO OLYMPIKAN’NY TANORA :: Nihintsana avokoa ireo atleta telo nifaninana voalohany
Jereo aloha ny eto ambany maso